Antsalova: Mitaraina amin'ny fitakiam-bola atao aminy ireo mpanabe
samedi, 08 juillet 2017 20:26
Leo amin'ny faneriterena sy fampandoavam-bola ataon'ireo lehibe izahay, hoy ireo mpampianatra mpanabe aty Antsalova. Mino izahay fa misy ny tetibola hanantanterahana ireo iraka isankarazany aty Antsalova kanefa dia izahay mpampianatra no volosana andro aman'alina ampanaovina tsipaipaika hamalifaliana ireo lehibe, hoy hatrany ny fitarainan'izy ireo.
Nampandoavina 2000Ar isany izahay handefasana olona haka ny laza adina CEPE sy BEPC any Maintirano, nangalana 3000Ar isany izahay handoavana ny saram-piantranoana sy sakafon'ny mpanolotsain'ny Ministra rehefa manao "mission" aty Antsalova izy.
Fa ataony inona ny "Ordre de mission"-ny? Ny sekoly koa mandoa vola hatramin'ny Ray aman-drenin'ny mpianatra handefasana ny zaza hanao "sport scolaire", fa nankaiza ny tetibola natokana ho amin'izany ?